Mareykanka oo soo saaraya sharci fududeynaya musaafurinta muhaajiriinta - BBC News Somali
Mareykanka oo soo saaraya sharci fududeynaya musaafurinta muhaajiriinta
Dowladda Mareykanka ayaa soo saareysa sharci cusub oo si deg deg ah dalka looga musaafurinayo muhaajiriinta aan haysan dukumeentiyo ay dalka ku joogaan, iyada oo musaafurintooda aan loo marin maxkamadaha dalkaasi.
Sharcigan cusub ayaa fududeynaya in la musaafuriyo muhaajiriinta aan sharciyada wadan isla markaana aan caddayn karin in si toos ah ay Mareykanka u joogeen muddo ka badan laba sano.
Maanta oo Talaada ah ayaa la filayaan in la soo saaro sharcigan isla markaana si buuxda looga dhaqangeliyo dalka oo dhan.
Haseyeeshee ururka xaquuqul insaanka ee dalkaasi Mareykanka ee ACLU ayaa shaaciyay in uu qorsheynayo in maxkamadaha dalkaasi uu horgeeyo dacwad ka dhan ah sharcigaasi.
Sharcigan ayaa ku soo beegmaya xilli xaalad adag ay ka jirto xeryaha muhaajiriinta lagu hayo ee ku yaal xudduudda koonfureed ee Mareykanka la leeyahay Mexico.
Lahaanshaha sawirka OFFICE OF INSPECTOR GENERAL
Dadka falanqeeya siyaasadda dalka Mareykanka ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne Trump uu doonayo in mowqif adag uu ka qaato sidii loo xaddidi lahaa mujaahiriinta imaanaya dalkiisa, arrintaa oo uu uga golleeyahay in uu ku xoojiyo ololihiisa uu ku doonayo in mar labaad dib loo soo doorto sanadka 2020-ka.
Horaan waxaa musaafuris halis ugu jiray dadka muhaajiriinta ahi ee ku nool deegaannada ilaa 160km u jira xudduudda ee dalkaasi Mareykanka joogay wax ka yar laba usbuuc.
Muhaajiriinta ku nool deegaannada kale ama dalkaasi joogay in kabadan laba usbuuc ayay ahayd in musaafuritooda loo maro maxkamadaha dalkaasi, isla markaana ay tahay in ay helaan garyaqaanno difaaca.
Balse sharcigan cusub ayaa dhigaya in dadka muhaajiriinta ahi si deg deg ahi dalka looga dhoofin karayo iyada oo aan loo eegeyn halka ay ku nool yihiin, waxaana suurtagal ah in aysan helin qareenno u dooda.
Waaxda ammaanka gudaha ee Mareykanka ayaa sheegtay in sharcigan cusub uu u ogolaanayo in si deg deg ahi ay u soo qabqabato muhaajiriin aad u badan.
Sidee baa looga falceliyay sharcigan?
Ururka xaquuqul insaanka ACLU ee dalkaasi Mareykanka ayaa bartiisa Twitter-ka ku shaaciyay in maxkamadaha dalakasi uu ka billaabayo loolan ka dhan ah sharcigaasi.
"Waxaanu si deg deg ah maxkamadda u horgeyn doonaa dacwad ka dhan ah dedaallada Trump uu ku donayo in tiro badan oo muhaajiriin ahi uu dalka ka musaafuriyo," ayaa lagu yiri qoraal uu Twitter-ka soo dhigay ururkan.
"Dadka muhaajiriinta ah ee muddada sanaddada ahi halkan ku noolaa ayaa noqonaya kuwo aan xuquuq lahayn oo si fudud dalka looga musaafuriyo. Qorshahaasi ayaa ah mid sharcidarro ah."
Jackie Stevens oo ah garyaqaab isla markaana ku takhasustay cilmiga siyaasadda oo ka tirsan jaamacadda Northwestern University ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay in 1% dadka u xiran laanta socdaalka iyo 0.5% dadka dalka laga musaafuriyay ay yihiin muwaadiniin Mareykan ah.
"Musaafurintan deg degga ahi ayaa xaaladda uga sii dari doonta," ayay tiri Jackie Stevens.